आलाेचनाबाट डराउनुहुन्छ ? यसरी ह्यन्डल गर्नुहाेस आलाेचना - ज्ञानविज्ञान
आलाेचनाबाट डराउनुहुन्छ ? यसरी ह्यन्डल गर्नुहाेस आलाेचना
मानिसले अालाेचनाकाे डरले अाफुलाइ गर्न मन लागेकाे काम हिच्किचाउछ भने उत्साहि रूपले काम गरिरहेकाे व्यक्ति अालाेचनाले हताेत्साहित हुन सक्छ । तर अालाेचनालाइ उपयुक्त रूपले लिन सक्ने व्यक्तिले अाफ्नाे लक्ष्यलाइ कहिल्यै छाेड्दैन ।
अालाेचनालाइ कसरी लिने ?
अालाेचना हरेक काममा हुन्छ । त्यसैले अालाेचना संग डराएर काम नगर्नु मुर्खता हाे । तपाइ मुर्ख नबन्नुहाेस । तपाइकाे लक्ष्य के हाे ? अालाेचनालाइ बुझ्ननुभन्दा पहिले अाफ्नाे लक्ष्यलाइ अात्मसात गर्नुहाेस । अठाेट गर्नुहाेस र अाफुमा हिम्मत भर्नुहाेस ।
प्रत्येक अा-अाफ्नाे विचार हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले अालाेचना गर्नु भनेकाे त्याे व्यक्तिले तपाइ वा तपाइकाे काम प्रति अाफ्नाे विचार प्रकट गर्नु हाे । र, तपाइकाे याेजना र लक्ष्य भनेकाे तपाइकाे अाफ्नाे विचारबाट प्रकट भएकाे हाे । अरूकाे विचारले गर्दा अाफ्नाे विचारलाइ छायाँमा पर्न नदिनुहाेस ।
अालाेचना दुइ प्रकारकाे हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक । सकारात्मक अालाेचनाले तपाइमा अझ निखारता अाअाेस भन्ने चाहेकाे हुन्छ भने नकारात्मक अालाेचना तपाइलाइ पछाडि धकेल्न प्ररित हुन्छ ।
हामीले यहाँ अाफ्नाे कामप्रति भएकाे अालाेचनालाइ कसरी ह्यन्डल गर्ने भन्नेबारे एक भिडियाे युट्यब च्यानल SAKARATMAK SOCH बाट साभार गरेका छाै । भिडियाे हेर्नुहाेस :
Don't Miss it गुणकारी ओखरको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउछ जान्नुहोस्
Up Next जस्तोसुकै जोर्नी दुखाईलाई पुर्णरुपमा निको पार्ने यो अचुक घरेलु औषधी, जानीराखौँ !
नराम्रो समयमा यो कुरा याद राख्नु ( भिडियोसहित )
खुशी को मतलब यो होइन कि तपाईंको जीवनमा कुनै प्रकारको समस्या नहोस्, खुशी त यो हो आफूमा आएको समस्याहरुको सामना…
दैनिक दिसा लाग्दैन ? अब नआत्तिनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय !
हाम्रो स्वस्थ्य हाम्रै हातमा रहेको छ । हाम्रो स्वास्थ्यमा देखिने समस्यालाई समयमनै पहिचान गरी सहि उपाय अपनाउन सकेका हामी निरोगी…
सजिलैगरी भन्न सक्छन् – मलाई टेन्सन छ । तर त्यो तनाबको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसारमा गम्भीर खालका रोगीको संख्या…